Okuthunyelwe Okubhaliwe Ngokubambisana ku-WordPress | Martech Zone
ULwesine, April 12, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Lapho wonke umuntu esicela ukuthi senze okuthile okuhlukile ngebhulogi yethu, asikaze siphendule ngokuthi “Angikwazi ukukwenza lokho.”. Senza ithoni yokuthuthuka kwe-WordPress futhi sihlatshwa umxhwele ngokungaguquguquki nenani lamathuluzi atholakalayo ukwenza umsebenzi wenziwe. Izolo, bekuyiposi lesivakashi ekukhuthazeni imicimbi ngemithombo yezokuxhumana… isinamatheli ukuthi bekuyibhulogi ebhalwe ndawonye!
Futhi sikwazile ukukwenza!
Kwakungelula lokho, noma kunjalo! Siqale ngokufaka i-plugin enkulu ebizwa ngokuthi Co-Ababhali Futhi ebonakala njenge-plugin yamanje enezici ezithile ezinhle kakhulu nokuhlanganiswa okuqinile. Awusasebenzi futhi ngokushesha lapho i-plugin isebenza, noma kunjalo. Nomaphi lapho ufuna ababhali abaningi bavele kuthempulethi, udinga ukuguqula ikhodi yakho ukuze usingathe ukugeleza nganoma yibaphi ababhali abengeziwe.
Kithina, lokho bekusho ukuthi sibuyekeze i-works.php enikeze imininingwane yethu yombhali kokucashunwe kwethu emakhasini asekhaya nasesigabeni - kanye nekhasi elilodwa leposi lebhulogi elibonisa isigaba sombhali ongokwezifiso ngaphansi kweposi lebhulogi.
Uma ubhala okuthunyelwe kwakho okubhaliwe, ungaqala ukuthayipha igama elengeziwe ukwengeza umbhali wesibili (noma ngaphezulu). Ukusebenza kokuqedela okuzenzakalelayo kusindisa impilo. Sinababhali abangaba ngu-60 ababhalisiwe kule bhulogi ngakho-ke kungcono kakhulu kunokuhlunga uhlu olukhulu. Ungahudula uphinde uphonsa ukuhleleka kwababhali uma ungathanda.
Okusijabulisayo ukuthi lokhu okuthunyelwe kuphinde kwavela ngokuzenzakalela kumakhasi womlobi womabili… ngakho-ke kubonakala sengathi abathuthukisi basebenzisa ikhodi enhle yokubuyela emuva okungenzeka ukuthi isivele ikhona ku-WordPress. Ngibonile ikhodi ethile eyisihluthulelo ngaphakathi kweWordPress engavumela ukuthi lesi sici sakhiwe ngokuzayo… kepha okwamanje i-plugin isebenza kahle kakhulu. Uma kwenzeka usakhathazekile ngakho, the abalobi faka abantu abavela ku- Automattic (Inkampani yabazali beWordPress).
Sinezinto ezimbalwa ezahlukile lapho sikhona ayibonisi - ingqikithi yeselula (esizoyibuyekeza kamuva), okuphakelayo kwe-RSS kanye ne- Uhlelo lokusebenza lwe-iPhone. Okwamanje, sinakho konke esikudingayo!
Tags: 2 ababhaliababhali ngeposi ngalinyecoaitorsababhali be-wordpress coamagama we-copressababhali abaningi be-wordpress
Okthoba 11, 2014 ngo-7: 34 AM
Sawubona, ngilawula ibhulogi yamahhala yeWordPress.com yekilabhu lami lobuntatheli besikole, futhi ngithanda ukukwazi ukucacisa ababhali bangempela, hhayi ngokufanele kubha yesihloko, ngendlela nje yokuchofoza amagama abalobi kunoma iyiphi i-athikili noma mayelana nekhasi bekuzovela okuthunyelwe emakhasini womabili abalobi. Ukuthuthuka kusuka kusayithi lamahhala akunambuzo, ngakho-ke angikwazi ukukwenza lokhu ngisebenzisa ama-plugins, futhi ngifuna ukuzama ukugwema ukuhlanganisa imikhakha noma amathegi. Uma kungenzeka ukumaka noma ukuhlukanisa i-athikili ngaphandle kokuthi ibonakale kubafundi, khona-ke leyo kungaba yindlela elula yokuthola kimi
I-Oct 11, i-2014 ku-5: i-48 PM
Kishan, ngokweqiniso angisazi isixazululo ngaphandle kokufuna ingqikithi engaba nalezo zici ozifunayo. Ngeqiniso asinalo ulwazi ngenguqulo yamahhala.